Ihe omuma nke onwu Mpozi di ka ogwugwu na blogosphere karia akuko akuko. Ruth Holladay, onye bụbu onye nta akụkọ nke Star, na-ede blọgụ oge niile banyere ọnwụ Mpozi ma na-akatọ Star. Mgbe m zutere ọtụtụ n’ime ndị isi nhazi akụkọ na Star, enwere m ike ikwu n’onwe m na ejiri m n’aka na ha niile na-enwe mwute na ọnwụ nke Maazị Tolbert. Enwere ike ịkatọ nzukọ Gannett na usoro nchekwa, mana echeghị m na ọ dị mma ịwakpo ndị ọma na-arụ ọrụ ebe ahụ.
Ihe a choro maka ndi oru ka ha kpoo nche karia 911 bu ihe kpatara esemokwu. N'ịbụ onye sitere na nkuzi nke ndị ọrụ Star, enwere m ike ịgwa gị na nke a bụ iwu na-ese okwu na-atụle ogologo oge. Tonweta igwe mbuli na-egosipụtakwa nsogbu. Lọ ahụ emeela ochie, yabụ enwere naanị igwe mbuli elu 2 nke ndị ọrụ niile nwere ike ịnweta - ma ha abụọ anaghị akwụ ụgwọ. N'ọnọdụ a, ọ dị ka a na-atụgharị ndị nnapụta gaa na mbuli onye ọrụ, ihe nwere ike ịbụ na ọ kpụchara nkeji oge iji nwaa ịchekwa Mr. Tolbert.
Nkuzi m na-aga ezi na ụlọ nke Mpozi, enyi nwanyị, ndị enyi ya, na ndị ọrụ ibe ya… tinyere ndị ọrụ niile na The Star. Lee nnukwu mfu.